खेलाडी हरुलाई काङ्ग्रेस खेलकुद बिभागको सम्मान – Daunne News
खेलाडी हरुलाई काङ्ग्रेस खेलकुद बिभागको सम्मान
रमेश कार्की साउन १७ / नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभागले पहिलो चरणमा १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई शुक्रबार नगद सहित सम्मानित गरेको छ । सुरुवाती चरणमा चितवन निवासी तेक्वान्दो खेलाडिहरु पार्वती गुरुङ र संगिता बस्याललाई काङ्ग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा द्वारा नगद रु. दस हजार सहित प्रमाणपत्रले समान गरिएको थियो। यी दुई खेलाडीहरु चितवन जिल्लाको राइजिङ स्टार हुन भने गत बर्ष देखि राष्ट्रिय टिममा आवद्ध भएका थिए । आफुहरुलाइ अन्य क्षेत्रहरू बाट मान सम्मान प्रदान गरीए पनि आफ्नै जिल्लाबाट भने सोचे बमोजिम सम्मान नगरेको गुनासो खेलाडिहरुले गरेका छन ।
दक्षिण एशियाली खेलमा चितवन बाट कुनै पनि पुरुषहरूले कुनै पनि बिधामा स्वर्ण पदक जित्न सकेका थिएनन । दुई महिला खेलाडी हरुलाइ गृह जिल्लाले जति चिन्न पर्ने हो त्यति चिन्ने कोशिश नगरेको थप गुनासो महिला खेलाडिहरुको ब्यक्त गरेका छन । उनिहरुले जिल्ला खेलकुद परिषदले सम्मान समेत नगरेको र उनिहरुको हौसला माथी ठेस पुराएको आरोप समेत लगाएका छन। दक्षिण एशियाली खेल भनेको एक दक्षिण एशियाली देशको सबैभन्दा ठुलो खेल हो यसको महत्त्व केवल खेलाडी लाई मात्रै हैन हरेेक जिल्ला वासीलाई थाहा हुुन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।
खेलाडी हरुको मेहनत र कठोर तालिमको अपमान गर्ने हो भने भोलि खेलाडीहरु विदेश पलाएन नहोलान भन्न सकिंदैन। खेलाडीहरु देशको गहना हुन भन्ने एउटा भनाइमा मात्रै सिमित रहदैं आएको छ । खेल र खेलाडिको सम्मान गर्नु भनेको गर्वको कुरा हो तर यस्तो कुराहरुमा स्थानिय निकाय हरुले नै ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाहिरी मुलुकहरुमा एउटा राष्ट्रिय तहको खेलाडी बन्न पुगे पनि उनीहरुको गुनगान चर्चा हुन सुरु हुन्छ । अन्ततः भोलिका दिनमा चितवन एउटा खेलकुद्को हब बन्न गइरहेको हुनाले खेल र खेलाडी हरुको सम्मान लाई ध्यानाकर्षण गर्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। खेलको हब भनेको त्यहाँ विभिन्न खेल मैदान देखि लिएर उत्कृष्ट खेलाडीहरुको उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्बप्रथम खेलकुदको आधारभुत चिज हरुलाइ बलियो बनाउन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । कुनै पनि ठाउँमा खेल मैदान मात्रै स्थापित गरेर मात्रै खेलको बिकास हुँदैन । एउटा आधार बाट नै जान पर्ने हुन्छ । गाउँ , स्कुल रास्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय तह सम्म लैजानुपर्ने खेलकुदलाई विभिन्न पदमा आशिन हुने विभिन्न निकायले र जिम्मेवार ब्यक्तीहरुकै पहल हुन पर्ने देखिन्छ । काङ्ग्रेसको यो सम्मान सङ्गै हौशला पाएका खेलाडिहरुलाइ आज बाट नै ध्यानाकर्षण गरे देखि भोलि पक्का चितवन एउटा साच्चिकै खेलकुदको हब कसो नबन्ला र ?
राज्यले चिन्न नसकेको खेल तेक्वान्दो